23 Paulo hwɛɛ Sanhedrin bagua no dinn kae sɛ: “Mmarima, anuanom, mede ahonim+ pa abɔ me bra wɔ Onyankopɔn anim abesi nnɛ da yi.” 2 Na ɔsɔfo panyin Anania hyɛɛ wɔn a wogyinagyina ne nkyɛn no sɛ wɔmmɔ+ n’ano so. 3 Ɛnna Paulo ka kyerɛɛ no sɛ: “Onyankopɔn rebɛbɔ wo, wo ɔfasu a wɔaka ho fitaa.+ Wotena ase bu me atɛn sɛnea Mmara+ no te, na bere koro no ara nso wubu Mmara no so+ hyɛ sɛ wɔmmɔ me?” 4 Wɔn a wogyinagyina hɔ no kae sɛ: “Onyankopɔn sɔfo panyin na woyaw no yi?” 5 Ɛnna Paulo kae sɛ: “Anuanom, minnim sɛ ɔyɛ sɔfo panyin. Na wɔakyerɛw sɛ, ‘Nka wo manfo sodifo ho asɛmmɔne.’”+ 6 Afei bere a Paulo hui sɛ nnipa no fã yɛ Sadukifo+ na fã nso yɛ Farisifo no, ɔteɛɛm wɔ Sanhedrin bagua no mu sɛ: “Mmarima, anuanom, meyɛ Farisini,+ Farisifo ba. Owusɔre+ ho anidaso ho nti na wɔrebu me atɛn yi.”+ 7 Esiane sɛ ɔkaa eyi nti, ɛyɛɛ akasakasa+ wɔ Farisifo ne Sadukifo no ntam, na nnipa no mu kyɛɛ abien. 8 Efisɛ Sadukifo+ no ka sɛ owusɔre+ anaa abɔfo anaa honhom nni hɔ, na Farisifo no de, wogye ne nyinaa di. 9 Enti ɛhɔ yɛɛ gyegyeegye,+ na akyerɛwfo a wofi Farisifo kuw mu binom sɔre kasakasaa denneennen sɛ: “Yenhu mfomso biara wɔ onipa yi ho;+ nanso sɛ honhom anaa ɔbɔfo kasa kyerɛɛ no a,+—.” 10 Afei bere a akasakasa no yɛɛ kɛse no, na ɔsahene no suro sɛ wɔbɛtetew Paulo mu asinasin, enti ɔhyɛɛ asraafo+ no sɛ wonkogye no mfi wɔn nsam mfa no mmra asraafo asoɛe hɔ.+ 11 Anadwo a edi hɔ no, Awurade begyinaa ne nkyɛn+ kae sɛ: “Nya akokoduru!+ Na sɛnea woadi me ho adanse+ fefeefe wɔ Yerusalem no, saa ara na ɛsɛ sɛ wudi adanse wɔ Roma nso.”+ 12 Na ade kyee no, Yudafo no pam Paulo tiri so+ kekaa wɔn ho ntam+ sɛ wɔrennidi na wɔrennom kosi sɛ wobekum no.+ 13 Nnipa bɛboro aduanan na wɔkekaa ntam de pam ne tiri so; 14 Ɛnna wɔkɔɔ asɔfo mpanyin+ no ne mpanyimfo no hɔ kɔkae sɛ: “Yɛaka ntam denneennen sɛ yɛremfa aduan nka yɛn ano kosi sɛ yebekum Paulo. 15 Enti, afei, mo ne Sanhedrin no mma ɔsahene no nhu nea enti a ɛsɛ sɛ ɔde no brɛ mo no fann te sɛ nea mopɛ sɛ muhu ne nsɛm no mu yiye.+ Nanso ansa na obedu ha no, na yɛahu ɔkwan a yɛbɛfa so ayi no hɔ.”+ 16 Nanso Paulo wɔfase tee sɛ nkurɔfo no akɔtetɛw no,+ enti ɔbaa asraafo asoɛe hɔ bɛbɔɔ Paulo amanneɛ. 17 Ɛno nti Paulo frɛɛ asraafo mpanyimfo no mu biako ka kyerɛɛ no sɛ: “Fa aberante yi kɔ ɔsahene hɔ, na ɔwɔ amanneɛbɔ bi ma no.” 18 Ɛnna ɔfaa no de no kɔmaa ɔsahene no sɛ: “Ɔdeduani Paulo frɛɛ me srɛɛ me sɛ memfa aberante yi mmrɛ wo, na ɔwɔ biribi ka kyerɛ wo.” 19 Ɔsahene no soo ne nsa twee no+ kɔɔ nkyɛn na ofii ase bisaa no sɛ: “Dɛn na wowɔ ka kyerɛ me?” 20 Ɔkae sɛ: “Yudafo no ayɛ adwene sɛ wɔbɛsrɛ wo ma wode Paulo abrɛ Sanhedrin no ɔkyena te sɛ nea wɔpɛ sɛ wohu ne nsɛm mu yiye.+ 21 Nanso mma wɔnnnan w’adwene, efisɛ nnipa bɛboro aduanan akɔtetɛw+ no, na wɔaka ntam sɛ wɔrennidi na wɔrennom kosi sɛ wobekum no;+ na wɔayɛ krado seesei retwɛn sɛ wobɛma wɔn ho kwan.” 22 Enti ɔsahene no maa aberante no kɔe na ɔhyɛɛ no sɛ: “Nka nkyerɛ obiara sɛ woada nsɛm yi adi akyerɛ me.” 23 Na ɔfrɛɛ asraafo mpanyimfo baanu kae sɛ: “Momma asraafo ahanu ne apɔnkɔsotefo aduɔson ne wɔn a wokurakura mpeaw ahanu nsiesie wɔn ho nkɔ Kaesarea anadwo dɔn a ɛto so abiɛsa* no mu. 24 Afei nso monhwehwɛ apɔnkɔ mma Paulo ntena so nkɔ amrado Felike hɔ dwoodwoo.” 25 Na ɔkyerɛw krataa a nsɛm a ɛwom ne sɛ: 26 “Me, Klaudio Lisia, mekyerɛw kɔma onuonyamfo Amrado Felike:+ Mikyia wo! 27 Yudafo kyeree ɔbarima yi a anka wɔrekum no, nanso ntɛm ara na mede asraafodɔm kogyee no,+ efisɛ mihui sɛ ɔyɛ Romani.+ 28 Na mepɛe sɛ mihu sobo a wɔrebɔ no nti, mede no baa wɔn Sanhedrin bagua no anim.+ 29 Mihui sɛ nea wɔde abɔ no sobo no fa wɔn mmara no mu nsɛm bi ho,+ nanso wɔmfaa asɛm biako mpo ntoo no so a ɛsɛ sɛ owu anaasɛ wogu no mpokyerɛ.+ 30 Nanso esiane sɛ wɔayi me asotiw sɛ wɔabɔ ɔbarima no ho pɔw+ bi nti, mede no rebrɛ wo ntɛm ama wɔn a wɔwɔ biribi tia no no abɛbɔ wɔn nkuro w’anim.”+ 31 Enti asraafo+ yi faa Paulo sɛnea wɔahyɛ wɔn no de no baa Antipatri anadwo no. 32 Ade kyee no, wɔmaa apɔnkɔsotefo no kwan ma wɔde no kɔe, na wɔsan baa asraafo asoɛe hɔ. 33 Apɔnkɔsotefo no kɔɔ Kaesarea+ de krataa no kɔmaa amrado no na wɔde Paulo hyɛɛ ne nsa. 34 Afei bere a ɔkenkan wiei no, obisaa no ɔmantam ko a ofi mu, na ohui+ sɛ ofi Kilikia.+ 35 Ɔkae sɛ “Sɛ wɔn a wɔabɔ wo sobo no nso ba a,+ mɛyɛ aso atie wo yiye.” Na ɔhyɛe sɛ wɔnhwɛ no so wɔ Herode aban mu.
^ Bɛyɛ anadwo nnɔn 9.